Catégorie : Lesona 3 : Ny hafatr'i Jesôsy ho an'ny fiangonana fito
TEO AMIN'NY NOSY PATMO, dia nasain'i Jesôsy nanoratra taratasy ho an'ny olona tany amin'ireo fiangonana fito tany Azia i Jaona. Nahakasika ireo fiangonana fito tamin'ny andron'i Jaona fotsiny ireo taratasy ireo tamin'ny voalohany, saingy nosoratana ho an'ny Kristianina rehetra amin'ny vanim-potoana mifandimby ihany koa.
Hitantsika fa misy fizarana enina ny hafatra tsirairay tao amin'ilay taratasy. (1) Voalohany, tononin'i Jesôsy ny anaran'ny fiangonana tsirairay. (2) Faharoa, manomboka amin'ny teny mitovy ny hafatra tsirairay: "Izao no lazain'Ilay..." - Apok. 2:1. Mampiditra tandindona sasany koa i Jesôsy mba hanampiana antsika hahita fa manome izay ilain'ny fiangonana tsirairay Izy. (3) Manaraka izay, ambarani Jesôsy amin'ny fiangonana tsirairay ny zavatra tsara na ny zavatra ratsy ataony. (4) Rehefa izay dia lazainy amin'ny fiangonana tsirairay ny tokony hataony mba hamahana ny olany. (5) Miantso ny fiangonana Izy mba hankato ny Fanahy Masina. (6) Farany, mampanantena ny olony Izy fa handresy ny fahotana izy ireo.
Nijery ny hafatr'i Jesôsy ho an'ny fiangonana tany Efesôsy isika tamin'ny herinandro lasa. Hijery kosa indray ny hafany ho an'ireo fiangonana enina hafa isika amin'ity herinandro ity. Ho hitantsika fa nanolotra izay nilain'ny fiangonana tsirairay tamin'ny lasa i Jesôsy , na nanao ahoana na nanao ahoana ny toe-java-misy. Koa azo antoka fa afaka manolotra izay ilaintsika fiangonana ankehitriny koa Izy.
Ny hafatr'i Jesôsy ho an'ny fiangonana any Smirna sy Pergamosy (Apok. 2:8-11)
Tanana tsara tarehy sy nanan-karena tamin'ny andron'i Jaona i Smirna. Namoaka lalàna anefa ny mpitarika tao, izay manery ny olona hiankohoka amin'ny amperoran'i Roma. Mety ho very zo ara-dalana ny olona manda tsy hankato io lalana io. Mety hitarika ho amin'ny fanenjehana sy ny fahafatesana maritiora mihitsy aza ny fanaovana izany.
Naneho ny tenany tamin'ny fiangonana tany Smirna i Jesosy ao amin'ny Apôk. 2:8-11. Ahoana no anampian'io fanehoan'i Jesosy ny tenany io antsika hahatakatra ny zavatra nitranga tao amin'io fiangonana lo? Inona no fampitandremana nataon'i Jesosy tamin'i Smirna momba ny olana ho avy?
Nihatra tamin'ny fiangonana kristianina nandritra ny 200 taona taorian'ny fahafatesan'i Jaona ny hafatr'i Jesosy ho an'ny fiangonana tany Smirna. Nenjehin'ny ampira rômanina mafy noho ny finoany ny Kristianina tamin'izany fotoana izany. Fanoharana io "folo" andro resahin'i Jesôsy ao amin'ny Apôk. 2:10 io. Ao amin'ny faminaniana momba ny fotoana ao amin'ny Baiboly, dia matetika no midika ho herintaona ny iray andro. Koa ny "folo andro" ao amin'ny Apok. 2:10 dia manondro ireo folo taona nanenjehan'i Roma ny Kristianina, izay nanomboka ny taona 303 TrK hatramin'ny taona 313 TrK. Tamin'io taona 313 TrK io no nanomezan'i Constantin Lehibe fahafahana ara-pivavahana ny Kristianina.
Vakio ny Apôk. 2:12-15. Ahoana no nanehoan'i Jesosy ny tenany tamin'ny fiangonana tany Pergamosy ao amin'ireo toko sy andininy ireo? Inona no nolazain'i Jesosy fa tsy nety tamin'ilay fiangonana?
Voahodidin'ny andriamani-tsy izy sy ireo tempoly lehibe ny Kristianina tany Pergamosy ka niatrika fakam-panahy avy any ivelany sy avy tao anatiny. Nitoetra ho mahatoky tamin'ny finoany ny ankamaroan'ny Kristianina, saingy nisy vondron'olona iray nanomboka nilaza fa tokony hanao marimaritra iraisana amin'ny fanompoan-tsampy ny fiangonana, mba hisorohana ny fanenjehana. Antsoina hoe Nikolaita io vondron'olona io.
Sary an'ohatra ny hafatra ho an'ny fiangonana tany Pergamosy. Maneho amintsika ny zavatra nitranga tao amin'ny fiangonana kristianina nanomboka tamin'ny taona 313 hatramin'ny taona 538 TrK izany. Nahazo fahafahana hivavaka tamin'Andriamanitra ny Kristianina nandritra io fotoana io. Mpino maro no nijoro ho mahatoky tamin'ny Filazantsara, saingy nisy hafa koa niala tamin'ny fahamarinana. Koa Lasa nitotongana ny finoan'ny fiangonana sy ny fitiavany ny fahamarinana.
Ny hafatr'i Jesôsy ho an'ny fiangonana tany Tiatira (Apok. 2:18-29)
Tsy dia tanana lehibe loatra tao amin'ny ampira remanina i Tiatira. Tsy nalaza noho ny fomba fiainany, na ny zava-kanto tao aminy, na ny sakafony, na ny fandihizany tahaka ireo tanana rômanina hafa izy io. Zavatra iray monja anefa no nampalaza azy: toerana lehibe ho amin'ny fandraharahana izy io. Tsy maintsy niditra tao amin'ny fikambanan'ny mpandraharaha ny olona iray raha te hanana fandraharahana ho azy manokana na te hahazo asa. Tsy maintsy nanao zavatra manokana anefa izany olona izany mba hidirana ao amin'ilay fikambanana. Tsy maintsy nanatrika ny lanonana firavoravoana nokarakarain'ny fikambanana sy nandray anjara tamin'ny fombafomba tao an-tempoly izy ireo. Matetika anefa no nahitana fihetsika maneho haratsiam-pitondran-tena sy fanompoan-tsampy ireo fombafomba ireo. Noroasina tsy ho isan'ny mpikambana ary tsy navela hividy na hivarotra ireo izay tsy nanaraka ireo fepetra ireo. Koa tsy maintsy nifidy na ny marimaritra iraisana na ny fahatokiana tamin'ny filazantsara ny Kristianina tao amin'io tanana io.
Vakio ny Apôk. 2:18-29. Ahoana no nanehoan'i Jesôsy ny tenany tamin'ny fiangonana tany Tiatira ao amin'ireo toko sy andininy ireo? Inona no nideran'i Jesôsy ny fiangonana? Inona kosa no olan'ny fiangonana?
Nitovy tamin'ny loza nandindona ny fiangonana tany Pergamôsy ny loza nandindona ny fiangonana tany Tiatira. Samy tandindomin-doza ny hahafoy ireo fahamarinana ara-Baiboly manan-danja izy roa ireo satria te hanao marimaritra iraisana amin'ny mpanompo sampy manodidina azy. Miresaka momba an'i "Jezebela" i Jesôsy ao amin'ny hafatra ho an'ny fiangonana tao Tiatira. Mpanjakavavy ratsy fanahy izy io, vadin'i Ahaba mpanjaka. Nitarika ny Isiraely hanota lalina sy hikomy tamin'Andriamanitra izy (1 Mpanj. 16:31-33). Mpijangajanga ara-panahy, izany hoe olona tsy mahatoky amin'Andriamanitra, no anehoan'i Jesôsy azy. Miara-mijangajanga ara-panahy aminy koa ireo izay nanaiky ny fampianarany.
Sary an'ohatra maneho ny fiangonana kristianina nandritra ny vanim-potoana antenantenany ny fiangonana tany Tiatira (538-1565 TrK). Avy ao anatiny fa tsy avy any ivelan'ny fiangonana ny loza lehibe indrindra nandindona azy tamin'io fotoana io. Lasa nanan-danja kokoa noho ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly tokoa mantsy ny hevitr'olombelona tamin'io fotoana io. Nampianarin'ny fiangonana ny mpanota koa fa ny fintondran-tena tsara sy ny asa no mamonjy azy ireo, fa tsy i Jesôsy velively. Niatrika fanenjehana sy fahafatesana mihitsy aza ireo izay tsy nankasitraka ny fitsipika vaovao napetraky ny fiangonana. Takona tsy hitan'ny fo sy ny sain'ny olombelona ny tena filazantsara marina nandritra ny zato taona maro tamin'io fotoana io, noho ireo fampianaran-diso ireo.
Ny hafatr'i Jesôsy ho an'ny fiangonana tany Sardisy (Apok. 3:1-6)
Nanana tantara be voninahitra ny tananan'i Sardisy. Efa very anefa ny lazany tamin'ny fotoana nifehezan'i Rôma ny tany. Mbola nanana ny hareny ihany io tanana io tamin'izay fotoana izay, saingy efa tamin'ny lasa fa tsy tamin'izany fotoana izany intsony ny voninahiny. Niorina teny an-tampon-kavoana mideza izany tanana izany ka tena sarotra tokoa ny niakatra teny aminy sy ny nanafika azy. Nahatsiaro tena ho voaro tokoa ny mponina tao hany ka natao tsirambina ny fiambenana ny mandan'ny tanana.
Vakio ny Apok. 3:1-6, sy ny Mat. 24:42-44, ary ny 1 Tes. 5:1-8. Inona ireo zavatra telo hita ao amin'ny Apok. 3:1-6 izay asain'i Jesosy ataon'ny Kristianina any Sardisy mba hanasitranana ny aretim-panahiny? Nampitandrina ny olony tany Sardisy i Jesosy mba hiambina ny loza mananontanona azy. Hoy Izy amin'izy ireo: "Miambena" - Apok. 3:2. Ahoana no anehoan'io fampitandremany io ny olony fa tandindomin-doza izy ireo? Ahoana no itovian'ilay fampitandremana mba hiambina amin'ny tantaran'ny taneinan'i Sardisy?
Eken'i Jesosy fa mahatoky amin'ny finoany an'Andriamanitra ny mambra vitsivitsy tao amin'ny fiangonana tany Sardisy, saingy tsy mahatoky kosa ny ankamaroany. Toa velona izy ireo raha jerena etk ivelany, saingy maty kosa ny fanahiny raha jerena ny ao anatiny. Tsy manameloka io fiangonana io noho ny fahotana na ny fikomiana i Jesôsy, fa noho ny fitsilamodamohana ara-panahy.
Maneho ny toe-panahin'ny vahoakan'Andriamanitra nanomboka tamin'ny taona 1565 hatramin'ny taona 1750 TrK ny hafatr'i Jestisy ho an'i Sardisy. Asehon'i Sardisy amintsika izay nitranga teo amin'ny fiangonana Protestanta taorian'ny Fanavaozana ara-pivavahana. Ny Fanavaozana ara-pivavahana dia ny fotoana tany amin'ny taona 1500 tany, izay nisian'ny fifohazana teo amin'ny fiangonana tany Eoropa ka nisian'ny fiovana ara-panahy goavana. Nitarika ho amin'ny fiandohan'ny fiangonana Protestanta ireo fiovana ireo. Nanomboka nitotongana ara-panahy tsikelikely anefa ny fiangonana taorian'izany. Tsy hita tao intsony ny finoana fa mamonjy antsika amin'ny fahasoavany i Jesôsy, ary ny fisainan'olombelona no nasolo ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Toa velona ny fahitana ny fiangonana ety ivelany, kanefa tena maty tokoa izany.
Ho an'ny Kristianina na aiza na aiza koa ny hafatr'i Jesôsy ho an'i Sardisy. Misy Kristianina izay tia miresaka .momba ny hatsaran'ny fifandraisany tamin'i Kristy tamin'ny lasa. Mampalahelo anefa fa tsy manana vaovao hozaraina momba ny fanandramany miaraka amin'i Kristy amin'izao fotoana izao izy ireo. Nahoana? Satria tsy avy amin'ny fo ny fivavahanizy ireo ary tsy tena manolo-tena ho an'ny filazantsara izy ireo.
Ny hafatr'i Jesôsy ho an'ny fiangonana any Filadelfia (Apok. 3:7-9)
Ho an'ny fiangonana tany Filadelfia ny hafatra fahenina nomen'i Jesosy. Ny hoe Filadelfia dia midika hoe "fitiavan-drahalahy". Teo akaikin'ny lalam-barotra iray no nisy io tanana io. Nantsoin'i Jesosy hoe "varavarana mivoha" izany satria nitarika ny olona ho amin'ny tany marindrano izay tena tsara tokoa ho an'ny fambolena. Tamin'ny andron'ny Baiboly dia nankany Filadelfia ny marary mba hitsabo tena.
Vakio ny Apok. 3:7-9. Ahoana no nanehoan'i Jesosy ny tenany tamin'ny fiangonana tany Filadelfia ao amin'ireo toko sy andininy ireo? Ahoana no anampian'io sary io antsika hahatakatra ny olana natrehin'io fiangonana io? Hoy i Jesosy: "Fantatro ny asanao, to manana hery kely ihany hianao" - Apôk. 3:8. Inona no asehon'io teniny io momba ny zavatra nitranga tao amin'io fiangonana io?
Ny hafatr'i Jesôsy ho an'i Filadelfia dia maneho ny zava-nitranga tao amin'ny fiangonana Protestanta nandritra ny fifohazana voalohany sy faharoa, nanomboka teo ho eo amin'ny taona 1740 hatramin'ny taona 1844 TrK. Nandritra io fotoana io dia nisy fifohazana ka niverenana indray tamin'ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly tao amin'ireo fiangonana tany Angletera sy Amerika. Fantatry ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany tsara fa tena zava-dehibe tokoa ny mankato ny lalan'Andriamanitra sy ny miaina fiainana masina. hay hoe "varavarana mivoha" ao amin'ny Apôk. 3:8 dia manazava ny fomba hidirana any amin'ny fitoerana masina any an-danitra, izay toerana iasan'i Kristy mba hamonjeny ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Tandindona izany satria miresaka mamba ny tempolin'Andriamanitra koa i Jaona ao amin'ny Apôk. 3:12 sy Apok. 4:1,2. Nanidy varavarana iray tany amin'ny fitoerana masina any an-danitra Andriamanitra, saingy nanokatra varavarana iray hafa indray Izy. Maneho amintsika ireo varavarana ireo fa niova ny asa ataon'i Jesôsy ho antsika any an-danitra nanomboka tamin'ny taona 1844.
Inona no fanazavana omen'ny Apôk. 3:10-13 antsika momba ny fahafohezan'ny fotoana sy ny fahantomoran'ny fiavian'i Jesosy fanindroany? Inona no hevitry ny hoe hosoratan'Andriamanitra eo amin'ny olony ny anarany (vakio ny 2 Tim. 2:19)? Tamin'ny andron'ny Baiboly dia naneho ny tao am-pon'ny olona iray ny anarany. Inona no ambaran'ny Eks. 34:6 momba ny olona izay nanana ny anaran'Andriamanitra voasoratra teo aminy?
Tandindona maneho ny fitiavany sy ny lalany ny anaran'Andriamanitra. Asehon'ny fampanantenana ataon'Andriamanitra ny hanoratra ny anarany eo amin'ny vahoakany fa ho hitan'ny olona rehetra eto an-tany fa mankato ny lalany ary maneho ny fitiavany io vahoakany io.
Ireo Kristianina tao amin'ny fiangonan'i Laodikia (Apôk. 3:14-17)
Ho an'ny fiangonana tany Laodikia ny hafatr'i Jesôsy farany. Tanana nanan-karena i Laodikia, ary niorina teo amin'ny lalam-barotra lehibe tao amin'ny ampira rômanina. Nampalaza an'i Laodikia ny landihazo, ny bankiny, ary ny sekoliny iray izay namokatra odi-maso. Feno volamena tao amin'io bankiny io. Nampieboebo sy nampirehareha ny fon'ny mponina tao amin'io tanana io izany hareny izany. Nisy horohoron-tany iray tany ho any amin'ny taona 60 TrK tany nandrodana ny tanana. Naniry ny hanampy ny mponina tao Laodikia hanorina indray ny tananany ny ampira romanina, saingy nolavin'izy ireo izany fanampiana izany satria nihevitra izy ireo fa nanana ny zavatra rehetra nilainy tao an-tananany ihany mba hanaovany samirery ny asa. Ny rano anefa no zavatra tsy mba nananan'i Laôdikia. Koa tsy maintsy nosarihina hankao an-tanana tamin'ny alalan'ny fantsona ambanin'ny tany ny rano. Nampikoriana ny rano avy tamin'ny loharano mafana tany Hierapolis ireo fantsona ireo. Satria tena lavitra avy teo Laôdikia no nisy an'i Hierapolis, dia niova ny maripanan'ny rano rehefa tonga tany Laodikia izany, ka lasa matimaty.
Vakio ny Apôk. 3:14-17 sy ny Hos. 12:8. Inona no ambaran'i Jesôsy ao amin'ny Apôk. 3 momba ny olan'i Laodikia? Ahoana no anampian'ny zavatra nianaranao momba an'i Laodikia anao hahatakatra ny antony nitenenan'i Jesôsy ny fiangonany tany Laodikia hanao ireo zavatra manokana ireo mba hamahana ny olany? Ahoana no nanjakan'ny toe-tsaina feno fieboeboana tao amin'ny tananan'i Laodikia teo amin'ny Kristianina tao amin'io toerana io koa?
Tahaka ny rano tonga tao amin'ny tananany ny Kristianina tao Laodikia: sady tsy mafana izy ireo no tsy mangatsiaka, fa matimaty. Nirehareha ny amin'ny hareny sy ny tsy filany zavatra hafa intsony izy ireo. Nasehon'i Jesôsy taminy anefa fa mahantra sy mitanjaka ary jamba amin'ny toe-panahiny izy ireo.
Tandindona iray hafa koa ny fiangonana tany Laodikia tamin'ny andron'i Jaona. Maneho mazava tsara ny toe-panahin'ny fiangonana kristianina amin'ny fiafaran'ny tantaran'ity tany ity izany. Ao amin'ny Apôk. 16:15, dia mampitandrina ny olony velona amin'ny andro farany i Kristy mba hitafy ka tsy hisy hahita ny fitanjahany. Tiany hitafy ny fitafiana natolony ny Laodikianina ao amin'ny Apôk. 3:17,18 izy ireo. Tsy mahatsiaro ny filany an'i Kristy anefa ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Mampitandrina io fiangonana io ny amin'ny zavatra hitranga i Kristy raha mifidy ny hitanjaka ihany izy ireo: tsy ho voavonjy izy ireo rehefa hiverina Izy.
Vakio "Ny Apokalypsy" - VM, tt. 513-526.
Mampisongadina ny fitotonganana ara-panahy ireo hafatra fito ho an'ny fiangonana tany Azia. Mbola nahatoky ihany ny fiangonana tany Efesôsy, saingy tsy tia ny fahamarinana tahaka izay nataony fony izy vao tia an'i Jesôsy io fiangonana io. Nahatoky tamin'Andriamanitra ny ankarnaroan'ny mambrareny fiangonana tany Smirna sy Filadelfia. Niroaroa saina teo amin'ny fahatokiany tarnin'i Jesôsy sy ny faniriany hoeken'ny olona ny fiangonana tany Pergamôsy sy Tiatira. Nanaiky fampianaran-diso hatrany hatrany izy ireo, mandra-pialany tanteraka tamin'ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Tao anatin'ny olana goavana ny fiangonana tany Sardisy. Tsy niaina araka ny Filazantsara ny ankamaroan'ny mambra tao aminy. Nisy vondron'olona vitsy ihany anefa nijoro ho mahatoky tamin'Andriamanitra. Ny fiangonana tany Filadelfia dia maneho ny fotoana nijoroan'ny vahoakan'Andriamanitra ho mahatoky taminy sy nankatoavany ny lalany, saingy vitsy anisa izy ireo. Tena ratsy aoka izany ny toe-panahin'ny fiangonana tany Laodikia hany ka tsy nanan-javatra tsara narnbara momba azy mihitsy i Kristy.
Mampanantena zavatra amin'ireo manaraka ny toroheviny anefa i Jesosy amin'ny fiafaran'ny hafany ho an'ny fiangonana tsirairay. Andao hojerentsika ny zavatra mahafinaritra amin'ireo fampanantenana ataon'i Jesôsy amin'ny fiangonana ireo. Hitanao ve fa arakaraka ny mampitotongana ny fiangonana tsirairay no anoloran'i Jesosy fanampiana betsaka sy anaovany fampanantenana maro kokoa? Jereo fotsiny ny fiangonana any Efesôsy. Fampanantenana iray ihany no omeny io fiangonana io. Fa arakaraka ny maharatsy ny fiainam-panahin'ny fiangonana aorian'i Efesasy no anomezan'i Jesôsy fampanantenana betsaka kokoa ho an'ny fiangonana tsirairay noho izay nomeny ny fiangonana teo alohany. I Laodikia no fiangonana farany nahazo fampanantenana. Izy no marefo indrindra amin'ny fiangonana rehetra teo alohany. Gaga isika fa fampanantenana tokana ihany no azony. to anefa no fampanantenana lehibe indrindra amin'ny fampanantenana rehetra: hiara-mipetraka amin'i Jesôsy eo ambonin'ny seza fiandrianany (Apôk. 3:21)!
1. Rehefa nitotongana ireo fiangonana ao amin'ny Apokalipsy, dia nomen'i Jesôsy fampanantenana misimisy kokoa izy ireo mba hanampiana azy. Inona no asehon'izany momba ny fomba fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra?
2. Manao ahoana ny fahasarotan'ny miaina ao amin'ny tanan-dehibe iray no sady mitoetra ho Kristianina? Tsy maintsy miaina eto an-tany isika, saingy tsy tokony havelantsika hanova ny finoantsika ny fomba flainana eto amin'izao tontolo izao. Ahoana no anampian'io fitsipika lehibe io ny olona velona ao an-tanan-dehibe hitoetra ho mahatoky amin'Andriamanitra?
3. Ho an'ny Kristianina velona amin'ny andro farany ny fampitandremana nataon'i Jesosy ho an'ny fiangonana tany Laodikia. Inona no hevitr’io fampitandremana io ho antsika Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito? Inona no tsy maintsy ataontsika mba hanovana ny fiainantsika?